2011-06-05 ~ Myanmar Express
မဟာပြင်ညာယှင်ကြီး အာဖျံကွီး စိုင်းသိန်းဝင်း ၏ တစ်ကိုယ်တော်အာပီဂျီ (RPG) စက်ရုံ ( ပေးစာ - ၁၇ )
တစ်နေ့သ၌ နုနယ်တက်ကြွလျက်ရှိသော ရှမ်းတိုင်းရင်းသား လူရွယ်တစ်ဦးသည် SSA အနေဖြင့် ရှုံးနိမ့်လျက်ရှိသော တိုက်ပွဲများတွင် အောင်ပွဲများ ရရှိစေရန်အလို့ငှာ အကူအညီတစ်စုံတစ်ရာ ရလိုရငြား အင်တာနက်ပေါ်သို့ တက်ရောက်၍ ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရှုလေ၏။ ထိုအခိုက် facebook တည်းဟူသော ရပ်ကွက်ကြီး၏ ရေကန်တစ်ခုအတွင်းရှိ ကြာပင်အောက်တွင် တစ်ခုခုအားချောင်းနေသော အသွင်ရှိသည့် မှုန်ကုတ်သောရုပ်ရည်၊ မိန်းမလျာမျက်နှာပေးနှင့် အရက်ဖောဖောနေသော အတ္တဘောပိုင်ရှင် တစ်ဦးအား မတော်တဆတွေ့မိချေ၏။ လူရွယ်လည်း သိချင်စိတ်ကို မအောင့်အည်းနိုင်တော့သည်နှင့် . . . . . လူရွယ် - ဗျို့ ! ! ! ဟိုလူကြီး ဘာချောင်းနေတုန်း ။ ရေကန်အတွင်းမှလူ - ပလုတ်တုတ် ! ! ! ကြာခိုဖို့။ အာာာ . . . . ဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကြီးက ပူလာပြီလေဗျာ အိုက်လွန်းလို့ ရေထဲဆင်းစိမ်နေတာပါ။ လူရွယ် - သြော် . . သြော် ။ ဟုတ်ပါပြီလေ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားနဲ့ တူတယ်ဗျ။ နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ သိခွင့်ရှိမလားဗျာ။ ရေကန်အတွင်းမှလူ - ဘာာာာာာာ ကွ ! ! ! ! ! ငါလို ကမ္ဘာကျော်။ နိုင်ငံကျော် မဟာနျူကလီးယား ဒုံးကျည်ပညာယှိကြီး ဗိုလ်မူးစိုင်းသိန်းဝင်းလိုလူကို မသိရအောင် မင်းညံ့လှချည်လားကွ။ လူရွယ် - ဗိုလ်မှုးမဟုတ်ဘူးလားဗျ။ ဘယ်နှယ့် ဗိုလ်မူးဖြစ်ရတာတုန်း။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - အနေအစားချောင်မလားလို့ တပ်ကထွက်ပြေး။ နိုင်ဂံဂျားရောက်တော့ ဒေါ်လာလေးများ နင့်နင့်နဲနဲရမလားလို့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ နျူကလီးယားတွေ မာလကီးယားတွေပြော၊ ဗုံးသီးတွေ အုန်းသီးတွေ လျှောက်ပြောတာကွာ။ အခြေအနေသိပ်မကောင်းပါဘူး။ ထောက်ပံ့ကြေးလေးမဖြစ်စလောက်နဲ့ ဟိုနေရာကပ်နေ ဒီနေရာကပ်နေ၊ ဟိုလူ့ဆီကပ်သောက် ဒီလူဆီကပ်သောက်နဲ့ အမြဲတမ်း မူးမူးနေလို့ အားလုံးက မူးနေတဲ့ ဗိုလ်ဟောင်း ဗိုလ်မူးငစိုင်း ဆိုပြီး နာမည်ပေးထားကြတာပဲ။ လူရွယ် - ဖြစ်ရမယ်။ ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဗျာ။ ဗိုလ်မူးက ပြင်ညာယှိပဲ အခုကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်ကြီး အခြေအနေမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ ကူညီနိုင်တာရှိရင်ကူညီပါအုံး။ ဗိုလ်မူးငစိုင်းမှာ ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံ၏ဆိုးရွားသောရာသီဥတု၊ မဖြစ်စလောက်ရရှိနေသော ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် ဆင်းရဲနေမှု၊ မီဒီယာတွေက ၀ိုင်းဝန်းမြှောက်ပင့်ပြီး ရသမျှသတင်းတွေကို မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ရွှီးစရာဖောစရာများ တဖြည်းဖြည်းရှားပါးလာသဖြင့် အချိုအချောင်နှိုက်ရန် ဂွင်သစ်ရှာနေဆဲကာလတွင် အမေးခံလိုက်ရသဖြင့် . . . . ဗိုလ်မူးငစိုင်း - ဟာ . . . . . အတော်ပဲ။ ဒီမှာ DVB ရဲ့ မယားငယ်လုပ်နေရတာအဆင်မပြေလို့ Green Card ရဖို့ ကြာခိုမယ်ကြံတုန်းလူမိသွားလို့ ကြံရာမရဖြစ်နေတာ။ ဂွင်သစ်တော့တွေ့ပြီ။ လူရွယ် - ခင်ဗျာ . . . . ဗိုလ်မူးငစိုင်း - အာာာာ ယောင်ပြန်ပြီ။ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူးညီလေးရ။ အစ်ကိုတို့လူမျိုးအတွက် အစ်ကိုအစွမ်းကုန်ကူညီမယ်လို့ပြောတာပါ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ . . . . လူရွယ် - လုပ်ပါဦးဗိုလ်မူးရယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ လက်နက်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ချမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - အိန်းးးးး လက်နက်ကောင်းကောင်းလိုချင်တယ်ဆို ငါ့အနေနဲ့ ငှက်ပျောဖူးကို စဉ်းစားမိတယ်ကွ။ လူရွယ် - ငှက်ပျောဖူး ? ? ? ဖီးကြမ်းလား သီးမွှေးလား။ ဘာလုပ်ဖို့လဲဗျ။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - ရွှေငှက်ပျော။ သူက အလုံးတုတ်ပြီး ရှည်တယ်လေ။ ငါ့အကြိုက်ပဲကွ။ ကတောက် ! ! ! ! မနောက်နဲ့လေ ဒီမှာယောင်တတ်ပါတယ်ဆိုမှ။ အကောင်းပြောမလို့ကွ။ လူရွယ် - ဟုတ်ကဲ့ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပြောပါဗျာ။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - ဒီလိုကွ တို့တစ်တွေ စစ်တပ်ကို တစ်နေရာရာကနေချောင်းပစ်ပီး အမြန်ဆုံးထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ အတွက်ဆို ငှက်ပျောဖူးလို့ ခေါ်နေကြတဲ့ RPG ဆိုတဲ့ လက်နက်ကအကောင်းဆုံးပဲကွ။ လူရွယ် - ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မူး။ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဆက်ပြီး အကြံပေးပါဦး။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - RPG တွေများများပစ်လို့ရအောင် စက်ရုံကြီးလုပ်ရမယ်လေကွာ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ . . . . လူရွယ် - ဟုတ်ပြီဗိုလ်မူး။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ကြေးစားပညာရှင်တွေလိုမှာပေါ့။ ဗိုလ်မူးငစိုင်း - ညှင်း ညှင်း ညှင်း . . . ဒီအတွက်တော့မပူပါနဲ့လေ။ ဟောဒီမှာ မဟာပြင်ညာယှိကြီး ဗိုလ်မူးငစိုင်း တစ်ယောက်လုံးရှိနေတာ။ ဘယ်သူမှထပ်မလိုတော့ဘူးလေ။ RPG စက်ရုံဆောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ သွပ်ပြားကအစ မီးခြစ်ဆံယမ်းအဆုံး ကျုပ်တွက်ချက်ပြီး proposal တင်လိုက်မယ်။ SSA ဘက်ကသာ ကျုပ်တောင်းသမျှ ပိုက်ပိုက်ပေးဖို့သာပြင်ထား။ ဘယ်ပြင်ညာယှင်မှ အပိုမလိုဘူးနော်။ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း မိတ်အင်တစ်ထိုင်တည်း RPG စက်ရုံအပြီးဆောက်ပေးမှာ။ လိုအပ်တဲ့ ဒေါ်လာလေးတွေသာပြင်ထား။ ဟဲ . . . ဟဲ . . . လူရွယ်မှာ ဗိုလ်မူးငစိုင်း ပေါက်ကြောင်ကြောင်ပြောနေသည်ကိုကြည့်ပြီး မျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးဖြင့် လူရွယ် - ခင်ဗျာ ! ! ! ! RPG စက်ရုံကို တစ်ယောက်တည်းနဲ့ဆောက်မယ် ! ! ! ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဗိုလ်မူးရယ် . . . ဗိုလ်မူးငစိုင်း - အိုး ! ! ! ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလည်း။ IT ခေတ်ကွ။ ဟော . . . . ကြည့် . . . ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်တာနက်နဲ့ချိတ် www.google.com ဆိုပြီးဖွင့် How to build RPG factory ? ဆိုပြီးရိုက်။ ပေါ်လာသမျှ website တွေက ရေးထားတာတွေကိုဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်လျှောက်လုပ် အဆင်ပြေတော့လဲပြေ။ မပြေတော့လဲ Technical Error ပေါ့ကွာ ဘာခက်တာမှတ်လို့။ အရေးကြီးတာက ဟဲ ဟဲ . . . ပိုက် ပိုက်ပါကွ။ $ $ ပါ။ လူရွယ်မှာ အင်မတန်အံ့အားသင့်စွာဖြင့် ဗိုလ်မူးငစိုင်းအား ပြူးကြယ်သည့် မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်ကာ လူရွယ် - ဟုတ် . . . . . ဟုတ် . . . . ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကို တပ်ဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေကို သွားပြောလိုက်ပါအုန်းမယ် . . . . ဟုပြောဆိုပြီး ဖနောင့်နှင့်တင်ပါးတစ်သားတည်း မကျရုံတစ်မယ် ဗိုလ်မူးငစိုင်း အပါးမှ ဝေးရာသို့ပြေးလေ၏။ ပေးပို့သူ - ဆောင်းပါးရှင် Ko IronMyanmar Express
မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ဒေါ်စုကြည်တို့သဘောထား
Sancation - Read More
မြန်မာအချင်ချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေ (ပေးစာ - ၁၆)
ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေး တစ်ခု တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်ရပ်မှန်လေးနဲ့ အတူ ကျွန်မနည်းတူ နောက်ထက် တခြားသော သူများ ကျွန်မခံစားရသော အဖြစ်မျိုးမှ ကင်းဝေးစေဖို့ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုထည်းကိုသာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက် ထည်းကိုမှ ထိခိုက် နာကျင်စေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်မျိုး မရှိပါကြောင်း အသိပေး လိုက်ရပါတယ်ရှင့်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ဆိုရသော် မြန်မာနိုင်ငံ သားအချင်းချင်း ယခုကဲ့လို့ လှည့်ဖျားခြင်းမှလည်း ကင်းဝေး စေချင်တဲ့ အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက စင်္ကာပူ နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေသော အမျိုးသမိး တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် Passport သက်တမ်းတိုးဖို့ အချိန်မပေး နိုင်တဲ့ အတွက် အေးဂျင့်စီတစ်ခုထံမှာ ကျွန်မရဲ့ Passport သက်တမ်း တိုးဖို့ အတွက် စဉ်းစားမိပြီး ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမ အေးဂျင့်စီ ထံသို့ ကျွန်မ သွားရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ပြီး လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံ အားလုံး ပေးခဲ့ပြီးအပြင် ကျွန်မရဲ့ Passport သက်တမ်း တိုးခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကျသင့်ငွေ ကိုပါ ပြောဆို ခဲ့ပြီး ကျွန်မ အိမ်သို့ ပြန်ခဲ့တယ်။ Passport သက်တမ်းတိုး ပြီးလျှင် အကြောင်းပြန်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်မလည်း ငွေကြေး အားလုံး ပြောဆိုပြိး ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်လက်အေးစွာပဲ နေမိသည်။ အေးဂျင့်စီ ထံမှ Passport သက်တမ်း တိုးခြင်း ကိစ္စ အဆင်ပြေ ပြီးမြောက်ပြီး ဖြစ်၍ လာယူလို့ ရပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်မဆီသို့ အကြောင်းကြား သောကြောင့် ကျွန်မလည်း စာအုပ်ယူရန် အေးဂျင့်စီ ထံသို့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။ တစ်ကယ်တမ်း သွားရောက် တွေ့ဆုံတဲ့ အခါမှာ ယခင်ပြောထားသော ဈေးနှုန်းထက် ပိုမိုတောင်း ခံသောကြောင့် ကျွန်မအနေနဲ့လည်း မပေးနိုင်ဟု အပြန်လှန် စကားပြော ဖြစ်ခဲ့ပြိး အေးဂျင့်စီဘက်မှလည်း ကျွန်မရဲ့ Passpot ထုတ်မပေး နိုင်ကြောင်း ပြန်လည် ပြောဆိုပြိး ကျွန်မရဲ့ Passport ကိုယနေ့ထိ ထုတ်ပေးခြင်း မရှိပါရှင့်။ ကျွန်မ သွားတောင်းတိုင်း ဈေးနှုန်း ကိစ္စသာ အကြိမ်ကြိမ် ပြောင်းလဲ တောင်းဆိုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တစ်ကယ်ဆို တိကျသော ဈေးနှုန်း၊ မှန်ကန်သော ဈေးနှုန်း ဖြင့်သာ တစ်သက်မှတ်တည်း တောင်းခံသင့်ပါတယ်။ အလုပ်မပြိးမြောက်ခင် ဈေးနှုန်းတစ်မျိုး အလုပ်ပြီးမြှောက် သောအခါ ဈေးနှုန်း တစ်မျိုး မပြောဆို သင့်ပါဘူးရှင်။ ကျွန်မတို့ မြန်မာ အချင်းချင်း မကူညီ မရိုင်းပင်ရင်တောင် အခုလို ခေါင်းပုံဖြတ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အခက်ခဲ အမျိုးမျိုးနဲ့ ကျွန်မတို့တွေ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းတပါးမှာ နေထိုင်နေကြရတဲ့ အထဲ ထိုသို့သော ပြသနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ကျွန်မလို သူမျိုး ဘယ်နှစ်ဦး ရှိမှန်း မသေချာ သလို ကျွန်မနဲ့ ထပ်တူ ဖြစ်ရပ်မျိုး ထပ်မဖြစ်စေရန် ကိုယ်ချင်းစားတရား ထား၍ ကျွန်မတို့ မြန်မာ လူမျိုး အချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း အေးဂျင့်စီရဲ့ လိပ်စာလေးမှ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ependent pass 12.5.2010 to 3.6.2011 111 North Bridge Road Peninsular Plaza #05 -59 Singapore (179098) Kaung htet (ma nwe)
စိုင်းသိန်းဝင်း နဲ့ DVB သတင်းထောက် စောလဲ့နန္ဒာ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
by Ko Iron on Sunday, 05 June 2011 at 20:33 ထပ်မံရရှိတဲ့ စိုင်းသိန်းဝင်းရဲ့ အီမေးလ်ထဲမှ အခု ဖေါ်ထုတ်မဲ့ အချက်အလက်တွေထဲမှာတော့ ထိုင်းမှာ ရောက်နေတဲ့ DVB သတင်းထောက် စောလဲ့နန္ဒာ နဲ့ ကြာကူလီ စိုင်းသိန်းဝင်းတို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက ကြာကူလီ စိုင်းသိန်းဝင်းဟာ နှမသားချင်း မစာနာ စောလဲ့နန္ဒာကို ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားတွေ ပြောဆိုထားတာခြင်း၊DVB သတင်းထောက် ထိုင်းမှာ နေသည့် စောလဲ့ နန္ဒာ တစ်ယောက် DVB မှာ လုပ်လုပ်နေရသော်လဲဘ၀အာမခံချက် မရှိခြင်း။DVB အခြေအနေ မကောင်းရင် ထိုင်းမှာ နိုင်ငံမဲ့ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ခြင်းတို့ကြောင့် အမေရိကား သွားရဖို့ ကြိုးစားနေခြင်း၊စောလဲ့ နန္ဒာ မှ DVB မှ သီရိထက်စံ အမည်ရှိ အမျိုးသမီးအား မယုံရန် ကြာကူလီ စိုင်းသိန်းဝင်းအား သတိပေးခြင်းအမေရိကားရှိ အသက်(၄၀) ကျော် ဦးလေးကြီး တစ်ယောက်က စောလဲ့ နန္ဒာကို ကြိုက်နေသော်လည်း၊ စောလဲ့ နန္ဒာက လက်ထပ်ဗီဇာ ဖြင့် အမေရိကား သို့ သွားလိုစိတ် ဆန္ဒမရှိပဲ စကော်လားရှစ် နှင့်သာ သွားလိုခြင်းတို့ ပါဝင်သလို စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ ထိုင်း၊ မလေးရှားတို့ ရှိ ဒုက္ခသည်များကို တတိယ နိုင်ငံ များသို့ ခေါ်ယူတော့မည် မဟုတ်ကြောင်းကို UN က ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု ဆိုခြင်း၊ ထိုင်းနှင့် မလေးမှာ ရောက်နေသော စစ်ပြေး၊ တပ်ပြေးများလည်း အမေရိကားသွားရဖို့ အေ၇း ကြိုးပမ်းနေတာ အခြေအနေမကောင်းကြောင်း၊ ထိုင်းရှိ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် UN လက်မှတ် အတွက် အရောင်းအ၀ယ်တွေ ဖြစ်နေတာ ကို UN က သိသွားတဲ့ အတွက် ပြသာနာ ဖြစ်နေကြောင်း၊ ကနေဒါ သွားရဖို့အရေး ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ ပေးရကြောင်း၊ စောလဲ့နန္ဒာမှ အဆိုပါ ဒုက္ခသည် အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စကို သတင်းလိုက်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ထိုအရောင်းအ၀ယ် ကိစ္စကို သတင်းထုတ်ပြန်ခါနီးတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်နေသူများက အသက်အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်လာသောကြောင်း သတင်း မထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ( မှတ်ချက် me == ကြာကူလီ စိုင်းသိန်းဝင်း စောလဲ့နနာ== DVB တွင် လက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော အမျိုးသမီး သတင်းထောက်)Chat with စောလဲ့နနာ nandar1 message စောလဲ့နနာ nandar Wed, Jan 12, 2011 at 5:21 PM 4:14 PM စောလဲ့နနာ:့ င မတွေံတာကြာပြီအစ်ကို ပြောက်လှချီလား4:15 PM အိုဘီမား မသိချင်ရောင်ဆောင်နေတယ်ပေါ့လေ4:16 PM me: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ မအိပ်ဘူးလား ဒီအချိန်ကြီး4:17 PM စောလဲ့နနာ: ဟင် အစောကြီး၇ှိသေးတယ် me: ဘယ်နှနာရီတုန်း စောလဲ့နနာ: ၁၁ နာ၇ှလေ me: ဒါဆို ထိုင်းနဲ့ အချိန်သိပ်မကွာဘူးပေါ့4:18 PM စောလဲ့နနာ: ဟုတ်မှာပေါ့4:19 PM me: ဘဲဘဲနဲ့အဆင်မပြေဘူးလား စောလဲ့နနာ: ပြေတယ်လေ ဟိဟိ ဘာလိုံလဲ4:20 PM me: ဒေါ်သီတာ ပြောသံကြားလို့ စောလဲ့နနာ: ဘာပြောလိုံလဲ ဟိဟိ အစ်ကို မသီတာက4:21 PM me: သြော် နန္ဒာလည်း သူ့ရည်းစားနဲ့ အဆင်မပြေဘူးနဲ့တူတယ်တဲံ ကိုယ့်ကိုပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး စောလဲ့နနာ: ဟုတ်လား4:22 PM me: သူများကိုပြောတာ နားစွန်နားဖျားကြားလို့ပါ စောလဲ့နနာ: ဟားဟားဒ ရည်းစားလိုံဘာလိုံစွတ်စွဲကြလဲမသိပါဖူးနော် အဲဒီကိစပဲဝိုင်းဖြေရှင်းနေရတယ် အချိန်တိုင်း ဟားဟား ဘ၀ကျင်ဖော် me: မင်းသမီးဆိုတော့ လူတွေစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ နော်4:23 PM ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော် စောလဲ့နနာ: အမ် ဘယ်ကမင်းသမီးလဲ အစ်ကိုရဲ့ဟားဟား me: ချင်းမိုင်မင်းသမီး စောလံ သံပြာ စောလဲ့နနာ: အောင်မယ် me: :D ကိုပုည ပေးထားတဲ့ နာမည်နော် စောလဲ့သံပြာတဲ့ ဟားဟားဟား4:24 PM စောလဲ့နနာ: မိုက်ရိုင်းတယ်4:25 PM me: ဘဝကျဉ်ဖော်တွေဘာတွေတောင် ဖြစ်သွားပီလား စောလဲ့နနာ: ဟာဟာဒ နောက်တာပါ ပြက်သွားပြီ လမ်းခွဲဠိုက်ပြီ ထာဝရ မဖြစ်နိုင်တော့လိုံပါ အခုတော့နောက်တဗွေပေါ့ ဟိဟိဟ me: ယလဲ့ စောလဲ့နနာ: တွဲနေပြီလေ4:26 PM အပျော်အပါးအရမ်းမက်လိုံ meတွဲနေပီ ဆိုတော့ ဘာမြင်ယောင်လဲ သိလား: စောလဲ့နနာ: လမ်းခွဲဠိုက်တာပါ ဘာလဲ me: မပြောဘူး4:27 PM စောလဲ့နနာ: ဟယလို me: ဘာလဲ စောလဲ့နနာ: ပြောဆို4:28 PM me ပလောင်အဖွားကြီးတွေ မြင်ယောင်တာပါ:်နို့တွေ တွဲလို့ ဟားဟားဟား မိုက်ရိုင်းတယ် မိုက်ရိုင်းတယ် စောလဲ့နနာ: မိုက်ရိုင်တယ်4:29 PM နော် me: ညစ်ပတ်တယ်နော် စောလဲ့နနာ: စိတ်တိုတယာ် me: စိတ်ညစ်စရာကြီါ် စောလဲ့နနာ: ညစ်ပတ်တယ်4:30 PM နနာပြောမှာဘာလိုံ လိုက်ပြော me: သြော် စိတ်ချင်းသိနေတယ်လေ ဟဲဟဲဟဲ စောလဲ့နနာ: တယ် စိတ်တယ်4:31 PM me: ဘယ်သူနဲ့ပွားနေတာတုန်း စောလဲ့နနာ: ဘဲဘဲ နဲံ4:32 PM me: သြော် ပွားပါ ပွားပါ ဒီလိုလေးနေမှာ စွံတော့မပေါ့4:33 PM စောလဲ့နနာ: အံမယါ်4:34 PM နော် me: ဘဲဘဲ အသစ်ရတော့ မာန်တွေတက်နေပီပေါ့ စောလဲ့နနာ: ဟင်အင်း နနာ မူနေတုံး me: မူနေတုန်း သူများနောက်ပါသွားအုန်းမယ်4:35 PM စောလဲ့နနာ: ပါသွားပါစေ me: ယောင်္ကျားလေးတွေ ရှားကရှားနဲ့ ဟားဟားဟား စောလဲ့နနာ: ကြိုက်သူပေါလွန်းလိုံ me: အင်းလေ ဟုတ်သားပဲ ကိုစိုင်းလဲ နန္ဒာ့ကိုကြိုက်တာပဲ4:36 PM စောလဲ့နနာ: မိုက်ရိုင်းတယ် နော်4:37 PM me: ကြိုက်တယ်ပြောတာ မရိုင်းဘူး မကြိုက်ဘူးပြောမှ ရိုင်းတာ စောလဲ့နနာ: အစ်ကို အစ်ကိုနေရာမှာပဲနေနော် me: အင်းလေ စောလဲ့နနာ: အောင်မယ် me: သဘောကောင်းတာ ကြိုက်တယ် ရိုးသားတာ ကြိုက်တယ် စောလဲ့နနာ: ကိုယ်ကိုယ်ကို သိပ်အထင်ကြီးပြီးအခုလို me: အလုပ်ကြိုးစားတာ ကြိုက်တယ်လေ4:38 PM စောလဲ့နနာ: အောင်မယ် me: ဘာတွေလျှောက်တွေးနေတာလဲ စောလဲ့နနာ: ရည်းစားရှိရက်ပြောတာရိုင်တာပေြါ့ မိုက်ရိုင်းတယ်နော် အစ်ကိုနော်တာ ထားလိုကပါ အစ်ကိုကိုနောက်နေတယ် နနာ နဲ့မမီမီနဲ့ 4:39 PM ဟားဟား me: မီမီကလား စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် me: ဗိုက်ခေါင်ထူကြီး ဟိဟိ စောလဲ့နနာ: နောက်နေတာနော်လိုံ4:40 PM me: ဘာတွေပြောနေမှန်းကို မသိတော့ဘူး စောလဲ့နနာ: စော်ဒီး စာမြီးသွားလိုံ စာမှားသွားလိုံ4:41 PM ဟီးဟီ အစ်ကို နနာ အမေရိကားရူးရူးနေတယ် အခု သိလား me: ကိုယ်တောင် သွားတော့မလို့ ခရီးသွားခွင့်လက်မှတ်ရရင် စောလဲ့နနာ: နနာ လေ me: အမေရိကားမှာ စာသွားသင်မယ် အင်း စောလဲ့နနာ: ဘယလို လိင်းနဲံသွားရမလဲ4:42 PM စဉ်းစားနေတယ် me: သွားနေတဲ့လူတွေ အများကြီး4:43 PM စောလဲ့နနာ: ဟုတ် me: နန္ဒာက ဘာဖြစ်လို့သွားလို့မရမှာလဲ လုပ်တော့လေ သွားချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိရင် စောလဲ့နနာ: နနာ စိတ်ညစ်နေလိုံလဲပါတယ်4:44 PM ထိုင်းမှာမနေချင်တော့မှ me: အသက်ငယ်တုန်းသွားတာ ကောင်းတယ် အင်းလေ ဘဲအဟောင်းတွေရော အသစ်တွေရော ပွလို့ စိတ်ညစ်စရာကြီး မနေနဲ့တော့ တစ်ရွာမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်တဲ့ ဒီဗီဘီမှာ ဘယ်နေ့အလုပ်ပြုတ်မယ်မှန်းမသိ :D4:45 PM စောလဲ့နနာ: မဟုတ်ဖူး အစ်ကို နနာ ဘ၀မှာ ဘဲကိစ က ဘာမှမဟုတ်ဖူး အရေးကြီးတာ ဘ၀အာမခံချက်အစ်ကို၇ဲ့ဒီဗီဘီက အခြေနေမကောင်းတော့ရင် ထိုင်းမှာ4:46 PM နိုင်ငံမဲ့ပြီအစ်မ ရဲ့me: ဟမ် စောလဲ့နနာ: အစ်ကိုကို သတိပေးရဦးမယ် me: စိတ်ညစ်တယ် ဘာလဲ ပြောလေ စောလဲ့နနာ: အစ်ကိုလို ခင်လိုံပါ me: အင်း စောလဲ့နနာ: သီရိထက်စံနဲ့ 4:47 PM အစ်ကို ဘ၀အတွင်းစကားတွေသိပ်မပြောနဲံ သူရုံးမှာ me: ဟုတ်လား စောလဲ့နနာ: လူအများစုရှေံမှာ အစ်ကိုနဲ့ အွန်လိုင်းမှာ me: ဒါတောင် တစ်ခါပဲ ပြောဖူးတယ် စောလဲ့နနာ: ကျွမ်းဝင်ကြောင်း လျှေက်ပြောတော့ နနာ လိုက်တားသေးတယ် me: သြော် စောလဲ့နနာ: နနာ တိုံ အော်စလိုမှာတောင် အစ်ကိုအကြောင်းမပြောခိုင်းဖူးလေ ဘယ်သူကဘာလဲမသိနိုင်ဖူးလေ4:48 PM me: အင်း ဟုတ်တယ် သူက အဲဒါတွေ မသိဘူးလား မသိဘူး ကိုယ့် အနေအထားကိုလေ စောလဲ့နနာ: နနာ နဲံ ကို နေထူး အစ်ကိုကို အတန်တန်လိုက်သတိပေးရက်ဒ နဲံ me: လူသိမခံနိုင်သေးတာကို စောလဲ့နနာ: အစ်ကို သွားပြောတယ်ဆိုပြီး နနာ စိတ်တိုနေတာ အစ်ကိုကို သူ မသိဖူး4:49 PM သူက ဟောင်ပွမ်သမား လှို့ဝှက်ကိစတွေဆို me: သြော် စောလဲ့နနာ: သိပ်မပြောကြဖူး သူံရှေံမှာ သူမှီ မဟုတ်ဖူး me: သြော် စောလဲ့နနာ: နနာ လဲ မယုံနဲံ အစ်ကိုဘ၀အတွက်ပြောတာ me: အေးအေး နောက်မပြောတော့ဘူး သူနဲ့လဲ အွန်လိုင်းမှာ တစ်ခါတွေ့တာပါ စောလဲ့နနာ: နနာ က လိုက်တာတော့ မနနာ နဲ့ ဘာဆိုင်လဲတောင်အပြောခံရတယ် me: သူ ဘလော့ဂ်ရေးတယ်တဲ့4:50 PM စောလဲ့နနာ: နနာ လဲ တင်းပြီးမပြောတော့ဖူး me: အဲဒါသူရေးထားတာတွေ ပြလို့ စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် အရာအားလုံးသတ်ိထားပါ နနာ စေတနာနဲံမှာတာပါ me: အင်းအင်း ကျေးဇူးပါ ကိုယ်လဲ ပြန်မပြောရင် ရိုင်းမှာ စိုးလို့4:51 PM အားနာတယ်လေ စောလဲ့နနာ: ပြန်တော့ပြော me: ကိုယ်နဲ့ စကားလာပြောတော့ ပြန်ပြောတာ စောလဲ့နနာ: လှို့ဝှက်ထားပေါ့နော် အစ်ကိုအတွက်ပါ အစ်ကို ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်လဲ me: သူ့ကိုလဲ ဘာမှတော့ မပြောဖြစ်ပါဘူး စောလဲ့နနာ: လုပ်မှာသာလုပ်တော့ ဘာမှမပြောနဲံအစ်ကို တော်သေးတပေါ့ သူက အ၇မ်းခင်တယ် me: ချဲ့ပြောရင်တော့ မပြောတတ်4:52 PM စောလဲ့နနာ: နော်ဝေမှာနေတယ်ကအစပြောနေတာ နနာ လဲ ရင်တထပ်ထိပ်နဲံ အွန်လိုင်းမှာ စကားတွေပြောဖြစ်တယ်ပဲပြောတာလေ ဘာတွေပြောလဲတော့မပါဖူး me: ကိုခင်မောင်ဝင်းသိရင် စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် သူ့ကို စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် နနာ လိုက်တာတယ် လက်နဲံတားလိုက် ပါးစပ်ကပြောလိုက်နဲံ4:53 PM အစ်မ နဲံ မဆိုင်ပဲနဲံ ဆိုတော့ ပြောရသူလဲ ဆက်မပြောရဲ နနာ လဲ အစ်ကိုတွေံမှာ ပြောတော့မယ် စဉ်းစားထားတာ ထိုင်က လူစံkw,f me: အမှန်ကတော့ ဒီဗီဘီက အချင်းချင်းပဲဟာ ဒီကိစ္စလျှို့ဝှက်သင့်တယ်ဆိုရင် တားရမှာပဲပေါ့ စောလဲ့နနာ: လူစုံတယ်လေ4:54 PM ဘယ်သူကဘာလဲမပြောတက် me: အင်း ကိုယ်လည်း သတင်းတွေကြားနေတယ် စောလဲ့နနာ: နနာ လာမေးရင်တော့ သိဖူးပဲပြောတယ် မခင်ဖူးလားမြင်ဖူးလာဆိုရင် မမြင်ဖူးဖူး တီဗီမှာပဲတွေံဖူးတယ်ပြောထားတယ် me: အင်း သူကလည်း အပြောမတတ်ထဲကပဲနဲ့တူတယ်4:55 PM ခက်တော့ခက်သား စောလဲ့နနာ: နောက်သတိထားပေါ့နော် အကုန်လုံးကိုပါ me: သူက ဒီဗီဘီရောက်တာ မကြာသေးဘူးလား ဒါလေးတောင် မသိတာ စောလဲ့နနာ: နနာ တိုံ နောက် ၁နှစ်ကြာမှရော်ကတာ အစက လူငယ့်အသံမှာ4:56 PM အခု ဒီဗီဘီ တီဘီဘက်ရော်ကတာ တနှစ်ပဲရှိသေးတယ် me: သြော် ယောင်္ကျားနဲ့ ခလေးနဲ့ မလား သူက စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် သူက နာမည်ာကီးသူသူဆို သိလိုက်ခင်လိုက်နဲံ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြွားတက်တယ် သူံအားနည်းချက်ပဲ4:57 PM ပညာတော့တော်တယ် me: အင်း စောလဲ့နနာ: စိတ်သဘောထားကောင်ယတ် စိတ်ထားကောင်းတယ် သူသိသူတက်သူသိ လုပ်တက်တာကလွဲရင် me: ဘိုထွဋ်ပြောတာ ကြားလိုက်တယ် တခါက စောလဲ့နနာ: ဟုတ်4:58 PM me: သူ့ယောင်္ကျားထက်တောင် သူက ပိုထက်တယ် ဘာညာပေါ့ စောလဲ့နနာ: ကိုသန်းဝင်းထွဋ် အလုပ်တွဲမလုပ်ဖူးသေးဖူး သူနဲံ me: အင်း မြှောက်ခိုင်းတာလားတော့ မသိဘူး စောလဲ့နနာ: မဟုတ်ဖူး me: သူဇာဆိုတာ သူ့ကိုပြောတာ မဟုတ်ဘား စောလဲ့နနာ: အွန်းလိုင်းကပဲ4:59 PM ခင်တက်တာ သေချာတွမလုပ်ဖူးသေးဖူး me: သူ့နာမည်အရင်းက သူဇာမဟုတ်ဘား စောလဲ့နနာ: တွဲဠုပ်သူတွေပဲသိတယ် ဟုတ်တယ် ဘာပဲပြောပြော သူမှမဟုတ် ဘယ်သူ့ မဆိုမယုံပါနဲံ ဒါပဲမှာချင်တယ် me: နန္ဒာ့ကိုတော့ ယုံပါတယ် စောလဲ့နနာ: မောင်လေး5:00 PM me: အဲ စောလဲ့နနာ:ဲံ မယုံနဲံ me: ယုံမှာပဲ စောလဲ့နနာ: နနာ လဲ အားနည်းချက်တွေ၇ှိတယ် me: ဘဲများတာလား စောလဲ့နနာ: တက်နိုင်ရင် me: ဟားဟားဟား စောလဲ့နနာ: ဘယ်သူမှမပြောနဲံ အောင်မယ် လူမှုံရေးပြောတာပါ5:01 PM မကြီး ဒီနေံသင်ပေးတာတွေမှတ်ထားနော် ငါ့မောင်အသက်ကြီးလာရင် ကြုံတွေံရဦးမယ်လေဲဟဲဟဲ me: ဟားဟားဟား နန္ဒာ့ကိုကြည့်ရတာတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ခံဖက်ကချည်းပဲလို့ထင်တာပဲ5:02 PM စောလဲ့နနာ: ဘယ်ဟာနဲံ ပတ်သတ်ရင်ပြောလဲ အစ်ကိုရဲ့me: သြော် သူများနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ မျိုးပေါ့ စောလဲ့နနာ: ဟဲဟဲ ခံရတယ်လိုံ မထင်ရင် ခံဖက်မဟုတ်ဖူးလေ ဟီးဟီး5:03 PM me: အင်းပါ အင်းပါ စောလဲ့နနာ: ဘ၀ဆိုတာရယ်စိတ်တိုင်းကြ တည်ဆောက်မှတကယ် me: သီချင်းတောင် ထဆိုလိုက်သေးတယ် စောလဲ့နနာ: သာယာလိမ့်မယ်ယုံကြည်တယ် လောလောဆည် နနာ ထိုင်းမှ မနေချင်တော့ဖူးအစ်ကိုရဲ့လောလောဆည် me: အင်းလေ အဲဒါကို ပြောနေတာပဲလေ5:04 PM စောလဲ့နနာ: နနာ ကိစ တခု ရူးရူးမိုက်မိုက် me: အမေရိကားသွားချင်တယ်ဆိုလည်း လုပ်တော့လေ စောလဲ့နနာ: လုပ်တော့မယ် စဥ်းစားထားတယ် လုပ်တော့မယ် me: အားပေးတယ် လူငယ်ဘဝမှာ မစွန့်စားရင် ကြီးတော့ ပိုခက်မယ် စောလဲ့နနာ: နည်းလမ်း ရှာမရဖူးအစ်ကိုရ5:05 PM လက်ရှိနည်းကလည်း မလုပ်ရဲဠိုံတွန်ံနေတာ me: သြော် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်လုပ်လို့ မရတာမျိုးဆိုရင် သူများကိုမေးပေါ့ လျှို့ဝှက်တယ်ဆိုတာ စောလဲ့နနာ: အသက်၄၀ကျော် ဦးလေးကြီးတယောက်က နနြ ကို ကြိုက်လိုံတဲ့လေ me: သူ့အကန့်နဲ့သူ လျှို့ဝှက်လို့ရပါတယ်၏ စောလဲ့နနာ: သူက အွန်းလိုင်းမှာပဲသိတာ me: သြော် စောလဲ့နနာ: သိပ်မယုံရဲဖူး5:06 PM နောက်တနည်းက me: လက်ထပ်ဗီဇာက သိပ်မမိုက်ပါဘူး စောလဲ့နနာ: စကော်လာရှောက်တာ me: စကော်လာလျှောက်တာတော့ အားပေးတယ် စောလဲ့နနာ: ဟိုရောက်မှ မကွာပေးရင်ဒုက me: လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ ဟိုရောက်မှ ဘယ်လိုလူမှန်းသိရမှာကြီး စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် အဲဒါတော့အကြောက်သား5:07 PM me: အင်းလေ ဒုက္ခသည်လျှောက်ရင်ရော ခက်တော့ခက်တယ် ဗီဇာရဖို့ စောလဲ့နနာ: မလွယ်ဖူး အစ်ကိုရဲ့အတော်လေးခက်ခဲတယ် me: အင်း စောလဲ့နနာ: အစ်ကိုတိုံ လက်ရီနိုင်ငံတွေက သွားရလွယ်သေးတယ် me: ဟုတ်တယ် စောလဲ့နနာ: ထိုင်းကမလွယ်ဖူးလေ5:08 PM me: ကိုယ်လည်း အဲဒါကြောင့် အချိန်အကြာကြီးစောင့်ခဲ့ရတာလေ စောလဲ့နနာ: ဘ၀မှာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တော့တွေံလာမှာပါ တွေံချိန်မှာ အမိအရယူနိုင်အောင်ပဲစဉ်းစားတော့မယ် me: လုပ်လို့ရတာ ကြိုလုပ်ထားပေါ့5:09 PM စောလဲ့နနာ: နနာ လုပ်တာနည်းလမ်းစုံနေပြီအစ်ကို ရ ဘယ်သူမှ မပြောနဲံနော် me: မလေးတို့ဘာတို့မှာ သွားပြီး ဒုက္ခသည်လျှောက်ရင်ရော မပြောပါဘူးဟာ စောလဲ့နနာ: အင်း me: သူ့အကန့်နဲ့သူထားတာ စောလဲ့နနာ: ဒုကသည်က မခေါ်တော့ဖူးလိုံ ယူအန်က အစီခံစာထွက်ထားတယ်လေ လောလောဆည် me: ဟုတ်လား စောလဲ့နနာ: ဒုကသည်တွေကိုတောင် me: အင်း ခွပဲ5:10 PM စောလဲ့နနာ: ပြန်ပို့ ဖိုံလုပ်နေတာကို ထိုင်းလဲဒီတိုင်းပဲ အဲဒီနည်းလမ်းက နနာ လုပ်ပြီးသား မရလိုံ me: အင်း စောလဲ့နနာ: လက်လွတ်လိုက်တာ me: ထိုင်းနဲ့ မလေးမှာ ကိုယ့် ညီတွေ လျှောက်ထားတာ ရှိတယ် ယူအက်စ်ကို သွားဖို့ စစ်ဗိုလ်တွေ စောလဲ့နနာ: မလွယ်ဖူး5:11 PM အမှန်တိုင်းပြောရရင် me: သူတို့လည်း မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ် စောလဲ့နနာ: ထိုင်းကအခြေနေတော့သိတယ် လေ အတော်တော်မလွယ်တော့ဖူး ယူအန်လဲ မကယ်နိုင်တော့ဖူး ပြောတယ် ဒုကသည်ရ လျှော့မသွားပဲတိုးလာသလို ဒုကသည် စခန်းတွေမှာ5:12 PM အရောင်းအ၀ယ်တွေတောင်ဖြစ်နေလိုံ ယူအန်သိသွားတော့ ပြသနာတက်ကြတယ် me: ဟုတ်တယ် ၁၈၀၀၀ တောင် တောင်းတယ် ဒါတောင် ကနေဒါ နော် စောလဲ့နနာ: ဟုတ်တယ် me: ထိုင်းဒုက္ခသည် စခန်းကနေ တဆင့်ပေါ့ စောလဲ့နနာ: နနာ အိုက်သတင်းလိုက်ခဲ့ဖူးတယ်5:13 PM ထုတ်ခါနည်း နနာ ကိုမထုတ်ဖိုံလာပြောလိုံ လိမ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲကအစ ရတယ် me: သြော် စောလဲ့နနာ: ထုတ်ရင် အသက်ခံရမယ်တောင်ကြိမ်းတာလေ me: အင်း အဲဒီ ကိစ္စပေါ်သွားရင် သူတို့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်မှာကိုး သေချာတယ် စောလဲ့နနာ: နနာ လဲ အမြင်ကပ်ကပ်ထုတ်ဖိုံစဉ်းစားသေးတယ် me: အသက်တောင်ရန်ရှာလိမ့်မယ်5:16 PM ပိုက်ဆံစုထားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ လိုတော့ လိုမှာ5:17 PM စောလဲ့နနာ: ရသလောက်တော့ စုနေပါပြီ ဖြစ်လာမယ်ယုံကြည်တယ် အစ်ကို ဟဲဟဲ ဟိုရော်ကရင် အစ်ကိုနဲ့ တွေံရင်တောင်တွေံနိုင်တယ် လေ ဟိဟိ me: ဟုတ်ပါပီ ဖြစ်လာပါစေဗျာ5:18 PM ကူညီပေးနိုင်မယ်ထင်တာဟာ ပြောပေါ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်ပေးပါ့မယ် စောလဲ့နနာ: အမ်မယ် သူလဲ ဒုကရော်ကနေတာပဲဟာကို ဆွိဒင်ကဈေးဝယ်လာတောတောင် နနာ ပြန်ရော်ငေးပးနေရတာကို ဟားဟား me: အင်းလေ ဒုက္ခရောက်နေသူအချင်းချင်း မစာနာ ရင် ဘယ်သူက စာနာမှာလဲ5:19 PM စောလဲ့နနာ: အစ်ကိုကိုလည်းသနားပါတယ် အစ်ကိုလဲ ဒီဗီဘီပေးသလောက်နဲံ ရပ်တည်နေရတောလ နနာ မတောင်းရပ်ပါဖူး အကူညီ အစ်ကိုလိုအပ်ရင်တောင် နနာ ကူညီပေးမှာပါ ငွေတော့မဟုတ်ဖူး အစ်ကို အသက်အနရယ် ကို5:20 PM တက်နိုင်သလောက် လုံခြုံပေးမှာပါ စိတ်ဓာတ်ကျနေရင် မြှင့်တင်ပေးမယ်လေ me: အင်းပေါ့ ဒါလဲ နည်းမှတ်လို့5:21 PM စောလဲ့နနာ: ကဲကဲ အိပ်ပြီအစ်ကိုရေ ဘိုင် me: အိပ်အိပ် ညည့်နက်ပီမူရင်း http://www.facebook.com/notes/ko-iron/ Gmail - Chat with sawlattnandar (12.1.2011) - Myanmar Express
စစ်တပ်က ဖြုတ်ထုတ်သက်လုပ်တယ် ဇတ်တူသားစားတယ် လို့ အမြဲပြောဆိုဝေဖန်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေရဲ့ ပြောစကားတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကရော သိပ်ပြီး ခြောက်ပြစ်ကင်းနေပြီလား၊ ဇတ်တူသားမစားကြဘူးလား၊ အချင်းချင်း သိပ်စည်းလုံးနေကြပြီလား လို့ ထင်ချင်စရာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရမကောင်းကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင် အတိုင်အဖောက်ညီကာ ဝိုင်းပြီး အတင်းအဓမ္မနဲ့ ဟုတ်တာတွေရော မဟုတ်တာတွေရောပါ ကရားရေလွှတ် ဝေဖန်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုဝေဖန်သူကိုလည်း နောက်လိုက်တွေက တန်းစီပြီး ထောက်ခံကြပါတယ်။ အစည်းလုံးဆုံးအချိန်ကတော့ အဲ့ဒီ တစ်ချိန်ပါပဲ။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေအားလုံးမှာတော့ အမြဲတမ်းပေါင်းလို့မရကြပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ညှိလို့လုံးဝမရပဲ ခုထိ ကွဲနေတဲ့ နိုင်ငံတကာက ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲကြည့်ပါ။ အစိုးရကို အပြစ်ပြောချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ခံယူချက်ပဲ တူပြီး ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ သူတစ်လူ ငါတစ်မင်းနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွေးတွေလို ရန်စောင်နေကြပါတယ်။ အဖွဲ့နာမည်တွေမှာ "ဒီမိုကရေစီ" ၊ "ပြည်ထောင်စု" ၊ "မြန်မာနိုင်ငံ" ၊ "လွတ်လပ်သော" ၊ "ဘားမား" ၊ "အခွင့်အရေး" စတဲ့ စာလုံးအကြီးကြီးတွေ ပေးထားပေမယ့် လုပ်နေကြတာကတော့ ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ချည်းပါပဲ သံဝေဂါ (၁)ကိုယ့်အချင်းချင်းကို ယုတ်ပျက်ဆင်းပျက် ဇတ်တူသားစားနေတဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခု ကြည့်ပါဒါလားဟဲ့..... နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူရဲ့ ရဲဘော်ရဲဖက်စိတ်ဓာတ် အဖမ်းခံရသူကိုချစ်အေးနှင့် အဖမ်းခံရသူများအား မသမာသူလူတစုဟု ယိုးစွပ်သူ NLD-LA (Malaysia) မှ ကျော်ကျော်တို့သည် ဓာတ်ပုံပါအတိုင်း လက်တွဲလုပ်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ယခင်က NLD-LA (Malaysia) မှ ကျော်ကျော်နှင့်အဖွဲ့ NLD-LA ဗဟို (ထိုင်း) သို့ အစည်းအဝေးတက်ရန်အတွက် ကိုချစ်အေးမှ အများဆုံး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကိုချစ်အေးအဖမ်းခံရချိန်တွင် သူ၏ဇနီးသည်မှာ ၄-နှစ်အရွယ် သမီးငယ်တဦးနှင့် ၁၀-လသားအရွယ် လူမမယ်ကလေးငယ်တဦးနှင့်အတူ အပြင်၌ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအချင်းချင်း ယခုကဲ့သို့ ချောက်တွန်းယိုးစွပ်ရက်သည့် ကျော်ကျော်၏အမူအကျင့်နှင့် နိုင်ငံရေးသိက္ခာကို NLD-LA ဗဟိုမှ လူကြီးမင်းများနှင့် နိုင်ငံတကာမှ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။ကိုင်း သံဝေဂ ယူနိုင်ကြပါစေဗျာ....သံဝေဂါ (၂)မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ တန်ခိုးရှင်မဟုတ်၊ ကိုယ်ပျောက်ဆေးမရှိသော သာမန်လူသားတစ်ဦးဖြစ်လိုက် ဒေါက်တာတစ်ဦး၏ ဝေဖန်မှုနှင့်မတိုက်တန်လောက်အောင် မြင့်မားတဲ့ အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေသော ဒေါ်စုကြည် ကို ဝေဖန်လျှင်အုပ်စုလိုက်ပေါင်းပြီးတုန့်ပြန်မယ်ဆိုပြီးချိန်းခြောက်တဲ့ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားကြီးအရက်သမားထင်ကျော်ထက် မှဘာမှနိုင်ငံရေးမှာ ဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ခဲ့ပဲခုမှ ဒီဖက်မှာ ဘလော့ဂါလေးလုပ်နေတဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဖူးပဲ ဖင်ခေါင်းကျယ်ချင်သော၊ေ-ာက်ဆင့်မရှိသော၊အရက်ကလေးသောက်၊ ကွန်ပျူတာလေး တစ်လုံးနဲ့ လုပ်ချင်ရာလုပ်နေသော၊ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာနဲ့ ခွေးလိုဟောင်နေသော၊အရက်သမားလွမ်းဆွေ သို့ ..တဲ့ နားထောင်ရင်း သံဝေဂယူနိုင်ကြပါစေဗျာ....သံဝေဂ (၃)တစ်ချိန်တုန်းက ဘုမသိဘမသိနဲ့ ဘလော့တစ်ခုထောင်ကာ နိုင်ငံရေးအမြင်လေး ဘာလေးရေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို ယောက်ျားအရင့်မာကြီးပေါင်းများစွာက နောက်ကနေ ပိုးစိုးပတ်စက် ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေ့ဆက်တိုးစေဖို့ နောက်ကနေ အတင်းတွန်းပေးကြပါတယ်။ ပိုစ့်တစ်ခု တစ်ခုမှာ ကွန်းမန့်ပေါင်းရာချီအောင် ရေးပြီး ထောက်ခံကြပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အဲ့ဒီမိန်းခလေးလောက် အမှန်တရား ပြောတတ်တဲ့သူ မရှိသလောက်၊ အဲ့ဒီမိန်းခလေးလောက် ခံယူချက်ကောင်းသူ မရှိသလောက် ပါပဲ။ နှမချင်းစာနာတတ်ကြတဲ့ အတိုက်အခံတွေကလည်း အများကြီးပါပဲ၊ အစ်မအရင်းတစ်ယောက်လို၊ ညီမအရင်းတစ်ယောက်လို သဘောထားကြတဲ့ ကိုကို မမ မောင်လေး ညီမလေးတွေကလည်း ပုံလို့။ဒါပေမယ့် မျက်လှည့်ပြလိုက်သလိုပါပဲ အဲ့ဒီလို အရမ်းချစ်တတ်ခင်တတ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာတတ်ကာ ထိုအမျိုးသမီးကို အားကိုးရှေ့တန်းတင်နေကြတဲ့လူအားလုံးက ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ မွေးနေ့မှာတောင် ဘယ်တစ်ယောက်ကမှ ဟက်ပီးဘက်ဒေး မပြောခဲ့ပါဘူး။ အလွန် အင်မတန်မှပဲ သံဝေဂါ ရစရာ ကောင်းလှတဲ့အဖြစ်အပျက်ပါ။ ကျွန်နော် ဒေါ်လာစားသာ အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးနေရာမှာဆိုရင် အရင်တုန်းက သူတို့တွေ ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေ၊ ထောက်ခံခဲ့တဲ့ နောက်လိုက်တွေရဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ ခုချိန်ကို ပြန်နှိုင်းယှဉ်ပြီး သံဝေဂတွေ မြောက်များစွာ ရနေမှာသေချာပါတယ်။ ခု ဘေးက ကြည့်ရုံနဲ့ပဲ သံဝေဂရလှပါပြီ။ အရင်တုန်းက အရမ်းကိုယ်ချင်စာတတ်၊ ချစ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားကြီး မိန်းမကြီးတွေနဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို အဆဲခံနေရချိန်တုန်းက ရှေ့တင်ကာ အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ ယောက်ျားကြီး မိန်းမကြီးတွေ ကိုယ်စားလဲ အလွန်ရှက်မိပါတယ်။ဤကဲ့သို့သော ရှက်စရာကောင်းသည့် လုပ်ရပ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့သူများကတော့Nge Naing ၊ (၈၈) မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ (ပြည်ပ) ၊ ကလိမ်ကကျစ်ကောင် ခြင်္သေ့ ရဲ့ အလိမ်ပေါ်ပြီ ၊ ကလိမ်ကကျစ် သန်းရွှေ ၊ ကိုကို ၊ ကိုစိုင်း ၊ ကိုဇော် ၊ ကိုတူး ၊ ကိုယ့်မျက်ချေးကိုယ်မမြင်ဘဲဝေဖန်သော (အိုပါး(ခေတ္တကိုရီးယား)) ၏ စာများကိုမဖတ်လိုသူ ၊ ကျော်ထင် ၊ ကျပ်စားသူ ၊ ကျိန်စာတိုက်သူ ၊ ကြက်ဖွတ် ၊ ကြိုင်ကြိုင် ၊ ကြောင်ရိုင်းတုတ်ကြီးရဲ့ သခင် ၊ ချက်ကြီး ၊ ချက်ကြီး ပြောတာမှန်တယ် ၊ ခွေး (တုတ်ကြီး) က လူပြန် ဟစ်နေပါလား ၊ ခြင်္သေ့ က Simple Views ဘလော့မှာ ၈၊ ၁ဝ၊ ၁ဝ ရက်နေ့အထိ Hide IP Software သုံးပြီး "ခြင်္သေ့" မဟုတ်တဲ့ နာမည် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝင်ဆဲ၊ ဝင်ပုတ်ခတ်သွားသေးတယ် ၊ ခြင်္သေ့ဆိုတာ ဒီလို (ကလိမ်ကကျစ်ကောင်) ပါ ၊ ခြင်္သေ့ အလိမ်ပေါ်ပြန်ပြီ ၊ ခြင်္သေ့ သူ့ငါးချဉ်သူချဉ်ထားတာပါ ခင်ဗျာ ၊ ခြင်္သေ့ သူ့ဟာသူ ချီးကျူးထားတာပါ ခင်ဗျာ ၊ ဂေးဗိုလ်ကြီး ၊ စာဖတ်ပရိသတ်တစ်ဦး ၊ စာဖတ်သူတစ်ဦး ၊ စစ်ခွေးကို အလိုမရှိသူ ၊ ဆရာပုဏ္ဏက ၊ ဆာဒန်ဟူစိန် ၊ ဆက်လုပ်စါးကြမယ်ဟေ့ ၊ ဆောင်း (မြန်မာစာ) ၊ ဇီးယိုသည် ၊ ဇင်ကို ၊ ညီလတ် ၊ တာရာ ၊ တော်စမ်းပါ၊ ကျော်ဆန်းရာ ၊ တောင်ကြီး ၊ တပ်က ဦးဏှောက်မဲ့တွေ ၊ တပ်ချုပ်ကြီး ၊ တုတ်ကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်ကို လူလို နားလည်တယ်လို့ ထင်နေကြသေးလား ၊ တုတ်ကြီးညီမယောကျာ်း ၊ တုတ်ကြီး နဲ့ ခြင်္သေ့ ... ဒီဘလော့ကို လာခဲ့ ၊ တုတ်ကြီး နှင့် ခြင်္သေ့ ကို သောသီခိုဘလော့မှာ မုန့်ဟင်းခါးစား ကြွဖို့ လာ ဖိတ်သွားပါသည် ၊ တုတ်ကြီး နှမလင် ၊ တုတ်ကြီးပထွေး ၊ တုတ်ကြီး မွေးစားအဖေ ၊ တုတ်ကြီးလို လူတိရိစ္ဆာန်ကို ချီးအပေခံပြီး ချီးလိုက်ကြွေးနေတဲ့ မဟာတတ်တိုး ၊ တုတ်ကြီး သို့ မဟုတ် ခွေးသူတောင်းစား သို့မဟုတ် ကယ်ပါ ၊ ဒေါင်းမင်း ၊ ထက်ထက် ၊ ထင်အောင် ၊ဒီမိုဝေယံ ၊ ဒေါက်တာကျော်မြင့် ၊ (လူသားအားလုံးအတွက် ရဲ့ အဖြေနဲ့ ခြင်္သေ့ ရဲ့ အဖြေ နှစ်ခုရဲ့ အဆင့်အတန်းကွာခြားမှုကို မြင်သာအောင် ပြောရရင် မြင့်မိုရ်တောင် နဲ့ ဇီးစေ့ လောက် ကွာခြားပါတယ် ဟု ) ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်သူ ၊ (အလည်လာသူတွေကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ရန်စ ပုတ်ခတ် ဆဲရေးတဲ့ ငပွကြီး "ခြင်္သေ့" နဲ့လူ့တိရစ္ဆာန် "တုတ်ကြီး" ကို (( "လေးစားပါတယ်" )) ဆိုတဲ့ "အိုပါး(ခေတ္တကိုရီးယား)" ဆိုတဲ့ နအဖ လက်ကိုင်တုတ်ကတော့ အယုတ်တမာကောင် စစ်စစ်ဘဲ ဟု ) ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ သုံးသပ်သူ ၊ ပါပါး ၊ ပေတလူ ၊ ဖိုးတုတ် ၊ ဖိုးထောင် ၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ဗလောင်းဗလဲ ပြောပြီး ကလိမ်ကကျစ် လုပ်နေတာကို သိလျက်နဲ့ ဖင်ပိတ် ထောက်ခံသော စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားများအတွက် ၊ ဖွတ်သတ်သမား ၊ ဗိုလ်မိုးကြိုး ၊ ဘုရားဘုရား ၊ ဘုရင့်နောင် ၊ မဖြောင့်မတ်သူများအတွက် ၊ မဟာတတ်တိုး ၊ မာဃ ၊ မိုးကြိုး ၊ 'မဟာအလောင်းမင်းတရား' (= ခြင်္သေ့) ဆိုတဲ့ မတန်မ၇ာ နာမည်ကို ယူထားတဲ့၊ ငါ့ဖခမည်းတော်၇ဲ့ အိမ်တော်ပါငယ်ကျွန် ဖြစ်တဲ့ မောင်မင်းအဖိုး (ကျွန်) ကမွေးတဲ့ မောင်မင်းအမိ သဘောက်မ၇ဲ့ သား အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကလေကချေ အောက်တန်းစား သဘောက်ကောင် 'မဟာအလောင်းမင်းတရား' ၇ူး ၇ူးနေသူ ခြင်္သေ့ ၇ဲ့ သခင် ၊ မင်းကြီးမဟာသက်တော်ရှည် အဂ္ဂသေနာပတိ မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းမြတ်ကြီး မဟာတတ်တိုး (ခေတ္တ မဟာရန်ကုန် ရွှေမြို့တော် ) ၊ မင်းခန့် ၊ မောင်ချင့်ချိန် ၊ မန်းကိုကို ၊ မြန်စာဂုဏ် သီဟဖေ၊ မြန်မာ ၊ ရှုးတိုးတိုး ၊ လူကြီးမင်း ၊ လူလိမ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ ၊ လူပေါကြီး (အိုပါး (ခေတ္တကိုရီးယား) ) ကို သနားတဲ့ လူငယ် ၊ လူ့ အကြံ ခွေး (တုတ်ကြီး) ဦး ၊ လင်း (မြန်မာစာ) ၊ ဝေဒ ၊ သဇင် ၊ သတိ ၊ သူရိန် ၊ ဟဟဟ၊ ဟောင်ဟေ့၊ ဟောင် ..... ဟောင် ..... ၊ ဟဟဟ = ဟောင်ဟောင်ဟောင် ၊ ဟိဟိဟိ ၊ ဟေ့ကောင် တုတ်ကြီး ..... မင်းအမေကို ပြန်မေးလိုက် ၊ ဟူကျင်းတောင် ၊ (ငပွကြီး ခြင်္သေ့ နဲ့ အ၇ူး တုတ်ကြီး ကို ဒီလောက် လေးစားနေတယ် ဆို၇င် မင်းအိမ်မှာ ကိုးကွယ်ထားလိုက်ကွာ ဟု ) အကြံပေးသူ ၊ (တုတ်ကြီး ဆိုသော ရုရှမှ စစ်ဗိုလ်ကို အပြီးအပိုင် ဘန်းသင့်ပါသည် ဟု) အကြံပေးသူ ၊ အဖြူလေး ၊ အမည်ပြောင်းခြင်း ၊ အမျိုးယုတ် တုတ်ကြီး က လူကြားထဲ ဘာလာလုပ်သတုန်း ၊ အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ ၊ အရာရာကို ဝေဘန်သုံးသပ်ပြီးမှ ပြောတတ်သည့် မဟာတတ်တိုး (ခေတ္တမဟာရန်ကုန် ရွေမြို့တော် ) ၊ `အလောင်းမင်းတရား´ (= ခြင်္သေ့) က အရူးပဲ ၊ အသိဥာဏ် နှိုင်းယှဉ်မှု ဇယား ၊ အိုးဝေအောင် ၊ အိမ်ရှင် Simple Views ၏ အောက်ထပ် ခွေးလှောင်အိမ်ထဲမှ လွတ်ထွက်လာသော ခွေး ငတုတ် ခေါ် ခွေး တုတ်ကြီး၏ အိမ်ရှင် Simple Views ၏ "ခွေးမဝင်ရ နယ်မြေ" အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော အိမ်အပေါ်ထပ်က ဧည့်သည် ၊ အိမ်တွင်းပုန်းကုလားမလေး ၊ ဦးနှောက် မသုံးတတ်သူ (ကလေးစစ်ဗိုလ်) များကို လမ်းညွှန်ပေးနေသူ ၊ ဧရာဝတီဘက်သား ၊ ဧရာဝတီ မလိမ်ပါ ၊ ဧည့်သည် ၊ါ်ါ်ါ်ါ်ါ်aaa, AKK, Ano, (a number of) Anonymouses (pro-democracy), bobo, burmeserevolutionary, Bystander, Co2zenith, guest (pro-democracy), Headshrinker, james, I HATE DICTATOR, I hate liars, Jimmy, jj, kevin, kiki, Ko Ko, ko lin, kt, kyaw, Lion Hunters, Lynn Sett, M2, Maung (pro-democracy), Mie Mie, Min, MM, MMM, moe, Myanmar, myint, MyoG, ngapock, nge, nyi-htet, Poll Boycott, Potato, Rough Guide, Sean, soe, strike for Real Democracy, Simple Report (ခြင်္သေ့ = ငပွကြီး), SV blog မှာ မိန်းကလေးကို လာလာဆဲ၇ဲတဲ့ စစ်ကျွန်တွေ ယောကျာ်းချင်း ယောကျာ်းလိုဆဲချင်၇င် လာခဲ့ကွာ, Teacher, tint, Tote Kyee's master, who is trying to tame Tote Kyee, Truth, TTZ, YeMinTun, win (pro-democracy), YY, zzzzzzzz, zaw နှမ ယောက်ကျားကဲ အဲ့လောက်များတဲ့လူတွေက တစ်ချိန်တုန်းက အရှင်သခင်တစ်ပါးလို ကိုးကွယ်ပြီး နောက်လိုက်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ရှေ့ဆောင်ကြီး မွေးနေ့မှာတော့ အထက်ကလူ တစ်ယောက်မှ မျက်နှာပြောင်တိုက် နှုတ်မဆက်နိုင်ကြရှာပါဘူး။ စည်းလုံးလိုက်ကြတဲ့ အတိုက်အခံများ။တစိမ့်စိမ့်တွေးရင်း သံဝေဂ ယူနိုင်ကြပါစေဗျာ.....။သံဝေဂ တရားကို ရှာလိုလျှင် တခြားနေရာတွင် သွားမရှာပါနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားကြီးများကိုပဲ ကြည့်ပါ။ သံဝေဂပေါင်းများစွာ အသင်မလွှဲမသွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်....။ကဲ အထက်က သုံးခုနဲ့ဆိုရင်ပဲ အတော်လေး ပြည့်စုံလို့ သံဝေဂ တော်တော်ရလိုက်ကြမှာပါ။ ကျွန်တော် မောင်ဒေါ်လာစားတော့ ဒီမိုအတိုက်အခံတွေကိုကြည့်ရင်း တရားရလွန်းလို့ တောပါထွက်ချင်သွားတယ်ဗျာ
ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ နဲ့ သူခိုးကြီး သူခိုးလေး များ (ပေးစာ - ၁၅))
မြန်မာချက်တင် နည်းပညာကို အဆင့်မြင့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် မြန်မာနည်းပညာရှင် လူငယ်များမှ တီထွင် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ် ဒီလင့်လေးမှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဒီလင့် ဒီမေးလေးကိုပို့ပြီး တော့လင့်ကိုနှိပ်မိလိုက်တာနဲ့ သင့်အကောက်ပါပြီလိုတောင်ပြောနိုင်ပါတယ် ရှောင်နိုင်ရှားနိုင်ကြပါစေ့http://akarphyoe.mixxt.at ထိုအလားတူ ပိုစ်မျိုးကိုလဲ ပိုစ်တင်သူ အာကာဖြိုးက မြန်မာချစ်သူများမှာ တင်ခဲ့ပါတယ်.....ထို လိမ်နေသည် ဆိုသော် ဂျီမေလ်းမှာ ကျွန်တော်လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော ဂျီမေလ်းဖြစ်ပြီးထိုအကြောင်းကို သိရှိသူ ပြတိုက်အဒ်မင်ချူပ် ဦးထူးဆန်းမှ မြန်မာချစ်သူ အဒ်မင်များကို အကြောင်းကြားပြီးထိုပိုစ်ကို မရေရာသောကြောင့် ဖျတ်စေခဲ့ပါတယ်..... ဒီလူက ဒီနေရာမှာတင်ရပ်မသွားပဲယခု အရူးလွယ်အိတ်မှာပါ ထပ်မံတင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အာကာဖြိုး ဖြင့် တွေ့ဆုံကာ ရှင်းမည်ဆိုသော်လဲ ကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးထားသ ည်ကိုရပ်ပလေး မပြန်ပဲ ရှိနေပါသည် ထို့အပြင် ၄င်း စာမျက်နှာအားဝင်ကြည့်ရာ မည်သည့် အထောက်အထားမှရေရေရာရာ မတွေ့ရသည့်အပြင် ဂျီမေလ်း ကိုလဲ မဖော်ပြထားပါယခု ဆိုလျင် အကောင့် ပိုင်ရှင် မိမိသည် လူတိုင်း၏ အထင်အမြင်လွဲခံရသည့်အပြင်မိမိ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော masterkhan30000@gmail.com ကို ပါ ဟတ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထု၏ အားကိုးရာ သတင်းမှန်းရင်းမြစ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုသတင်းအရင်းအမြစ်တွေဟာ မမှန်မကန် ပေါက်ပန်းလေးဆယ် သတင်းတွေဖြစ်နေရင်ဘယ်သတင်းကို ယုံရမှန်းမသိ ထည့်ရေးခံရသူဟာလဲ တစ်ရက်ထဲနဲ့ ဟုတ်မှန်းမသိမဟုတ်မှန်းမသိ နာမည်ပျက်နိုင်ပါတယ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ သတင်းမှန်မမှန်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီးတင်ပေးသင့်မှ တင်ပေးကြပါလို့လေးစားစွာ တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ masterkhan30000@gmail.comဂျီမေလ်းကို ဟတ်သွားသော သူ၏ ချိန်းချောက်စာ ပါ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ပြတိုက် Admin Junior ရဲ့ Mail ကို Hack ထားပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်အရမ်းလန့်မသွားပါနဲ့! ခင်ဗျားတို့ ဘာလုပ်လုပ် ကျူပ်တို့ သိနေပါတယ်.... ပြတိုက်ကို Crack လုပ်ချင်ရင် အလွယ်လေးပါ သိပ်ပြီးပညာမပြပါနဲ့ ကို Junior ခင်ဗျားကို ပညာပေးတာပါ သတိပေးတဲ့ သဘောပါ ကျူပ်တို့ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေမှာ လိုက်မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ကျူပ်တို့ Hack ထားတဲ့ Mail တွေကို လိုက်ပြန်ဆယ်ပေးတာမျိုးတွေ လုံးဝ ထပ်မလုပ်ပါနဲ့ (ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်သတိပေးတာပါ) ခင်ဗျား Mail Password ကို လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ ထဲက ကျူပ်တို့ရထားပါတယ် ခင်ဗျား လှုပ်ရှားသမျှ ကျူပ်တို့ သိနေပါတယ်masterkhan30000@gmail.com password - hi0.123456987654321.0 အခုတော့ ခင်ဗျား Mail ကို ကျူပ်တို့ ခန ထိန်းသိမ်းထားပါမယ် Mail ထဲက ကျူပ်တို့ လိုချင်တာတွေ ယူပြီးရင် ပြန်ပေးပါမယ် သတိပေးတာကို လိုက်နာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်A@M Hack စာဖတ်သူ အပေါင်းသတင်းအမှန်နှင့်လုပ်ကြံသတင်းကို ခွဲခြားနားလည်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ ဆိုရှယ်နက်ဝက်ဆိုတာနဲ့ အကုန်တန်းစီပြီး အီးမေးတွေလုပ်ကြ၊ facebook တွေ သုံးကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း အဆင့်တန်းမရှိနည်းလေးတွေနဲ့ hack ကြပါတယ်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းပြီး သာယာစိုပြေနေတဲ့ မြန်မာအင်တာနက်လောကတစ်ခုလုံး ညစ်ညမ်းကုန်ပါပြီ။ဟိုတုန်းက မြန်မာဘလော့တွေစပေါ်ချိန်မှာ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ စီဘောက်စ်တွေမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စနောက်နေကြတာတွေနဲ့ မင်္ဂလာရှိရှိ နုတ်ဆက်ထားတာတွေပဲရှိပါတယ်။ နောက်မှ နိုင်ငံရေးဘလော့ ဆိုပြီး တန်းဆီပေါ်လာချိန်ကစပြီး စီဘောက်တွေမှာ ဆဲသံဆိုသံတွေ မိုးမွန်ခဲ့တော့တာပါပဲ။ အခုလည်း ဘလော့တွေတင် ညစ်ညမ်းစေရုံသာမကတော့ပဲ သီးခြားအကောင့်တွေပါ ခိုးဖို့ BHG ဆိုပြီး အဖွဲ့ထောင် ခိုးဖို့လုပ်နေကြပြန်ပါပြီ။ ဒေါ်စုကြည်ကိုထောက်ခံသူတွေကလည်း ဝိုင်းအားပေးနေကြပါတယ်..။ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဗျာလမ်းကြုံရင် ဒေါ်စုကြည်ကို ပြောပြပေးပါ""သူ့ဘာသူ အိမ်မှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့နေနေ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ယုတ်ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တော့ ဆိုရှယ်နက်ဝက်ပေါ်ကို တက်မလာပါနဲ့.."" လို့Myanmar Express
မဟာပြင်ညာယှင်ကြီး အာဖျံကွီး စိုင်းသိန်းဝင်း ၏ တစ်က...
မြန်မာအချင်ချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြပါေ...
စိုင်းသိန်းဝင်း နဲ့ DVB သတင်းထောက် စောလဲ့နန္ဒာ အကြေ...
ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ နဲ့ သူခိုးကြီး သူခိုးေ...
မိုးသီးဇွန်တို့ ဒူးတုန်ရမည့် ပါဂျောင်စခန်းလူသတ်မှု့များစုံစမ်းရန် ABSDF စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို အစိုးရက ခွင့်ပြုလိုက်ပြီ
ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်စခန်း၌၁၉၉၂ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သောကျောင်းသားများ ကို အစုလိုက် အပြုံ လိုက် သတ်ဖြတ် မှု့များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ABSDF(မြန်မာနို...